မောင်ကျောက်ခဲ(မြန်မာပြည်): ခင်ဝင့်ဝါရဲ့ ဘီကီနီ အလှ
▼ Aug 25 - Sep 1 (30)
ရခိုင်ပြည်နယ် မဟူတောင်ကို ဘင်္ဂလီများက သူတို့ပိုင်သည...
ခင်ဝင့်ဝါ အပျိူတော် အက နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မည်
အနက်ရောင်ဘီကီနီနဲ့ အလှသွေးကြွယ်နေတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
ကင်တားနား ကားရဲ့မှန်တံခါးကိုထုပြီးစာပေးလို့ ဒေါ်အော...
ခင်ဝင့်ဝါရဲ့ ဘီကီနီ အလှ
ကျဉ်ဆံလှဆွေတို့များ ကိုယ့်မြေးအရွယ် လောက်တောင် ဦး...
တက္ကသိုလ် ဆရာဆရာမ များအသင်း အား ကျနော်မေးလိုပါသည်
ထိုင်းတောင်ပိုင်း မွတ်ဆလင်ပဋိပက္ခများအတွင်း ရဲတပ်ဖွ...
မစ္စတာ နမ်ဘီးယား ထံသို့ ရှမ်းလူမျိုးစုယဉ်ကျေးမှုကော်...
၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဈေးလျှော့ရောင်းမည့် ကြေငြာတစ်ခုတွ...
ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ သတင်းထောက်တွေ စီတန်းလှည့်လည်ကြ...
ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာ ဈာပနာကို လုပ်စားသွားတဲ့ နိုင်ငံေ...
ကန့်ဘလူမြို့နယ် ထန်းကုန်း နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
မွတ်ဆလင်ကုလား အဓီကရုဏ်းများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနေချိ...
တောင်ပြုန်းပွဲတော်မှာ ကန်တော့ပွဲပေးခဲ့တဲ့ အနုပညာပျ...
မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တာ (၉၆၉) နှစ်ြ...
နိင်ငံတော်ဘာသာနေ့ ကျင်းပမည့်ကိစ္စ သံတွဲတွင် ကောလာဟလ...
ဦးရဲထွဋ်ဖော်ပြသော ထန်းကုန်း ပဋိပက္ခ ဓါတ်ပုံများ
ကေအန်ယူ (KNU) အဖွဲ့မှ ဖမ်းထားသော ထားဝယ်-ထီးခီးလမ်း...
Home » ဓါတ်ပုံကဏ္ဍ » ခင်ဝင့်ဝါရဲ့ ဘီကီနီ အလှ
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 11:37 AM
59 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်:
ခင်ဝင့်ဝါ ဆိုတဲ့ ဖာသယ်မရဲ့ 
ဖာသယ်မ ဖာခေါင်းတို့ ၏ သမီးများ
ဖာအိုက်တင်ပေး ဖာမျက်နာပေးနဲ့ 
ဖာစုကြည်ပါတီ ကဘဲ ဖြစ်မယ်
မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ တယ်ရဲရင့်နေကြသကိုး
လူ့ ဘဝ ဒါနောက်ဆုံးဘဲ
အင်း အပါယ်ကလာတော့ အပါယ်ဘဲ သွားရပြန်ပါပကော
ငရဲ တိရိစ္ဆာန် ပြိတ္တာ အသူရကာယ် ကို သွားမယ့် ဟာမတွေဘဲ
မောင်က ဖာခေါင်း အုပ်စု နဲ့ တူပါတယ်
ကလေးတွေ လိုက်ပြီး အတုခ်ိုးမမှားကြပါနဲ့ 
ဖာသယ်မ ခင်ဝင့်ဝါ အစား ရှက်ကြ ကြောက်ကြပါ
မြန်မာမိန်းခလေးအနည်းစုက နံမည်ကြီးမယ်သာဆိုရင် ရေကူးဝတ်စုံနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူး... ဘာအဝတ်မှ မဝတ်ပဲနဲ့ ပြိုင်ရမလား.... လာထား ပဲ ။
မြန်မာ ယောင်္ကျားလေးတွေကတော့ မြန်မာမိန်းခလေးတွေ လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်ကြမှ ကြိုက်ကြတာ များတယ် ။
8/30/13, 12:32 PM
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်တဲ့ ၀တ်စားပုံတွေနဲ့ ဝင်ပြိုင်ရမဲ့ နိုင်ငံတကာ မယ်ပြိုင်ပွဲတွေကို မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို
ဝင်ပြိုင်ခွင့် မပြုသင့်ပါဘူး ။ ပြန်စဉ်းစားပေးကြပါ နိုင်ငံတော်လူကြီးများခင်ဗျား ။
တိုင်းပြည်ဂုဏ်တက်အောင် ကြိုးပမ်းရာမှာ အခြားကဏ္ဍတွေ အမြောက်အများ ရှိတာပဲ ။
Miss Universe ရလိုက်မှ တခြားနိုင်ငံတွေက အော်..... မြန်မာလဲ အယင်တုန်းကလို ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် ၀တ်စားတဲ့နိုင်ငံ မဟုတ်တော့ပါလား လို့ မြင်သွားရင်.. ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲ ။
အရှက်နဲ့သိက္ခာကို နာမည်ကြီးမှု၊ ငွေရမှု နဲ့ လဲရက်ကြသလား ။
ကျွှန်တော့်အတွေးအခေါ်တွေ အောက်နေပြီလို့ ဝေဖန်လဲ ကျေနပ်ပါတယ် ။
8/30/13, 12:42 PM
ဟု တ် ပါ တယ် ။
အစ် ကို ပြော တာ ထော က် ခံ ပါ တယ် ။
ရေ ကူး ဝတ် စုံ ဝတ် ပြီး ပြိုင် ရ မဲ့ နိူင် ငံ ခြား က မယ် ပြိုင် ပွဲ တွေ ကို မြန် မာ မ လေး တွေ ကို မ လွှတ် သင့် ပါ ဘူး ။
ညီ မ လဲ မိန်း မ သား ပါ ပဲ ။
ဒါ ပေ မယ့် ကိုယ့် မြန် မာ မိန်း က လေး တ ယောက် ကို ဒီ လို ကြီး မြ င် ရ တာ တ မျိး ပဲ အ စ် ကို ။
မျ က် စိ စူး လှ တယ် ။
မြန် မာ ချစ် သူ
8/30/13, 1:03 PM
ွဲေ၇ကူးဝတ်စုံဝတ်မှပြိုင်လို့၇မယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာမယ်ပြိုင်ပွဲမျိုးကို မပြိုင်နဲ့ပေါ့ အဲ့ဒါမပြိုင်၇လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးအတွက် ဘာမှမနစ်နာဘူး
နိုင်ငံတကာမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ ပြည်တွင်းမှာပါ အဲ့လိုပွဲတွေလုပ်လာတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေေ၇ာ ယောင်္ကျားလေးတွေပါ စိတ်ဓါတ် အကျင့်စာ၇ိတ်တ ပျက်စီးကုန်တယ် အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားလှတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုပါပျက်စီးကုန်ေ၇ာ
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုပျောက်၇င် မြန်မာလူမျိုးပါပျောက်မှာဘဲ့ အဲ့ဒါကမှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးအတွက် ပြန်ပြင်လို့မ၇တဲ့ ဧ၇ာမဆုံး၇ှုံးမှုကြီး
မြန်မာမတွေကကောင်းတာတွေကိုသာအတုမယူချင်ကြတာ အခုလိုအဖေါ်အချွတ်ပွဲတို့ အတိုအပြတ်ဝတ်တာတို့ လိုမျိုးဆို၇င်တော့အတုယူတာမြန်မှမြန်ဘဲ့
အခုပုံစံအတိုင်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုက ကုန်းဆင်းအတိုင်းလှိမ့်ဆင်းနေတာကိုဆက်ပီးခွင့်ပြုထား၇င် မကြာခင်မှာမြန်မာမတွေက ကဘာကျော်ယိုးဒယားဖါသယ်မတွေကိုကျော်တက်သွားမှာဘဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးလဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့ဖါနိုင်ငံကြီး တကယ်ဖြစ်လာတော့မှာဘဲ့
နန်းခင်ဇေယျာ ခင်ဝင့်ဝါ တို့ လုပ်၇င်းနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးလဲ ဖါပြည်ကြီး ဖြစ်တော့မှာသေချာသွားတာပေါ့
8/30/13, 9:43 PM
8/30/13, 10:35 PM
ဒီလို ဖေါ်ပြ ချွတ်ပြ ဖင်လှုပ်ပြ နို့၇မ်းပြ ကုန်းပြ ကော့ပြနေတဲ့ ပွဲမျိုးကို တဏှာကြည့်နဲ့ဘဲကြည့်ကြမှာဘဲ့
အဲ့လိုမို့ ဒီပွဲမျိုးတွေလုပ်တာဟာ အကျင့်စာ၇ိတ်တပျက်ပြားစေတာအမှန်ဘဲ့
8/30/13, 10:45 PM
ဆူးခက်နဲ့သာ ရိုက်ချင်တယ် ပြီးမှ့့
8/30/13, 10:54 PM
မြန်မာပြည်မှာ ခွေး ၂ ကောင် ကိုက်တာကအစ သတင်းလုပ်ပီးေ၇းနေတဲ့ ဒီမိုသူတောင်းစားမီဒီယာတွေလဲ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဗြောင်စော်ကားပြနေတဲ့ အဖေါ်အချွတ်ပွဲတွေလုပ်ပီး တလွဲဆံပင်ကောင်းနေတာကို သောက်ပေါက် ပိတ် မနေကြနဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်မနေကြနဲ့
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ပျောက်၇င် မြန်မာလူမျိုးပျောက်မှာပဲ
အနောက်ယဉ်ကျေးမှုက အာ၇ှကနိုင်ငံငယ်လေးတွေကိုဖျက်ဆီးတာက ဘင်္ဂလီကုလားကမွတ်ဆလင်ဇာတ်သွင်းမဲ့ အန်တ၇ယ်လိုပဲဆိုးတာပဲ
အမေ၇ိကန်ကောင်တွေကိုအထင်ကြီးပီးလက်ခံလို့ အမေ၇ိကန်ဆီက သောက်တလွဲတွေကိုအတုယူမှားလို့ ယိုးဒယားတစ်ပြည်လုံးကမြို့တိုင်းမှာ ယိုးဒယားမတွေသိန်းနဲ့ချီပီး ဖါဖြစ်နေတာကြာပီ
အမေ၇ိကန်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ ဖိလိပိုင်မှာလဲ ယိုးဒယားလောက်မဆိုးတာတောင် ဖိလိပိုင်မတွေလဲ သောင်းနဲ့ချီပီးဖါဖြစ်ကုန်တာပဲ
၇ိုး၇ိုးသားသားအလုပ်လုပ်တဲ့ ယိုးဒယားမတွေ၊ ဖိလိပိုင်မတွေ အများကြီး၇ှိနေသေးပေမဲ့ အဲဒါကိုနိုင်ငံခြားကလာလည်တဲ့ ဧည့်သည်တွေက မသိကြတော့ဘူး
ယိုးဒယားမ၊ ဖိလိပိုင်မ ဆိုတာနဲ့ ဖါသည်မလို့ တွဲပီးမြင်နေကြတာပဲ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၇ဲ့ပုံ၇ိပ် လူမျိုးတစ်မျိုး၇ဲ့ပုံ၇ိပ်ဆိုတာ အဲဒါပဲ
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဗြောင်စော်ကားပြနေတဲ့ အဖေါ်အချွတ်ပွဲတွေက မော်ဒယ်တွေကို အတုယူမှားကုန်၇င် မြန်မာနိုင်ငံလဲ ယိုးဒယား၊ ဖိလိပိုင်လို ဖါနိုင်ငံကြီး ဖြစ်သွားမှာပဲ
မြန်မာပြည်၇ဲ့ပုံ၇ိပ်က ယိုးဒယားပြည်၊ ဖိလိပိုင်ပြည်၇ဲ့ပုံ၇ိပ်လို ဖြစ်လာမှာပဲ မြန်မာမတွေ၇ဲ့ပုံ၇ိပ်က ယိုးဒယားမ ဖိလိပိုင်မတွေ၇ဲ့ပုံ၇ိပ်လို ဖြစ်လာမှာပဲ
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၇ဲ့ထိန်းကွပ်မှု၇ှိနေသေးတာတောင် မြန်မာမတချို့က ကဲချင် ၇ွချင် ဖေါ်ချင် ပြချင်နေကြတာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဗြောင်စော်ကားပြနေတဲ့ အဖေါ်အချွတ်ပွဲတွေလုပ်ပေးနေ၇င် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့ ဖါနိုင်ငံကြီး တကယ်ဖြစ်လာမှာ
8/30/13, 11:01 PM
8/30/13, 11:14 PM
ဒီလိုပွဲးမျိုး ၀င်မပြိုင်လို့လဲး မြန်မာမတွေ မလှဘူးလို့၊ ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့၊ မြန်မာရဲ့ အလှက ပွဲးမတိုးဘူးလို့ ဘယ်သူမှ မပြေားပါဘူး၊
ဘီကီနီဝတ်ပြီး ပြိုင်ရတဲ့ မယ်ပြိုင်ပွဲဟာ အားကစားနည်းတခုပါ၊ အမြင်မကျဉ်းပါနဲ့ လို့ မပြေားစေခြင်ဘူး၊ ဘာ့ကြောင်းလဲးဆိုတော့ အားကစားမို့ ချစ်မြတ်နိုးတာပါ ဆိုရင် တစ်နစ်ရိုက်ပါလား၊ ကြက်တောင်ရိုက်ပါလား၊ ပြေးပါလား၊ ခုန်ပါလား၊ ပြစ်ပါလား၊
ခိုင်ခိုင်မော် တစ်ယောက် ၀ူရှုးမှာ အာရှအဆင့် ရွှေတံဆိပ် ရခဲ့တုန်းက ဘီကီနီဝတ်ပြီး ပြိုင်ရတဲ့ မယ်ပြိုင်ပွဲဟာ အားကစားနည်းတခုပါ၊ အားကစားကို ချစ်မြတ်နိုးပါ ဆိုတဲ့ ကိုယ်တော်တွေ နန်းခင်ဇေယျာ နဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
မယ်ပြိုင်ပွဲလောက် အုပ်အော်သောင်းနင် ဖြစ်ဖို့ဝေးလို့ လုံးဝ မသိလိုက်သူတွေက ခပ်များများ၊
တခုခုတော့ မှားနေတာ သေချာတယ်၊
8/30/13, 11:27 PM
8/30/13, 11:32 PM
ဘီကီနီ ဝတ်ပြီး ပြိုင်ရတဲ့ မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်မှ
8/30/13, 11:48 PM
8/31/13, 12:43 AM
8/31/13, 12:50 AM
ပြိုင်ပွဲဝင်ရာမှာ ဘီကီနီနဲ့ပြိုင်မှရလို့ပါ ဘာညာနဲ့ အကြောင်းပြပီး
ဖေါ်ချင် ချွတ်ချင် လှန်ချင် ပြချင်နေတဲ့
8/31/13, 2:58 AM
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့တဲ့ ဖါသည်တိုင်းပြည် တကယ်ဖြစ်လာအောင် အားပေးအားမြှောက် လုပ်ပေးနေကြတဲ့ပွဲ
ကျက်သေ၇၇ှိတဲ့ မြန်မာ့အလှကို ဖျက်ဆီးတဲ့ပွဲ
8/31/13, 3:03 AM
8/31/13, 3:11 AM
ကျွန်တော်တို.ငယ်ငယ်က သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို သတိရမိတယ်။ ဘာတဲ့........၊ "ရောမအင်ပါယာကြီးတခုလုံး... မီးဟုန်းဟုန်း တောက်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တာ မိန်းမပါပဲ...... မင်းတို.တတွေပဲ....၊ မိန်းမဖျက်လို. ပြည်ပျက်ခဲ့တာ... မိန်းမဖျက်လို. ပြည်ပျက်ခဲ့တာ... သိပါတယ် သိပါတယ်.. ကွယ်" ....၊ ဆိုတဲ့သီချင်းလေ။
အခုလည်း တိုင်းပျက်၊ ပြည်ပျက်၊ လူမျိုးပျက်၊ ဘာသာပျက်၊ ယဉ်ကျေးမှူပျက်ရလေအောင် စည်းမဲ့၊ ကမ်းမဲ့၊ ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာနဲ. တလွဲဆံပင်ကောင်းကာ အဆုံးစွန်ထိ လွတ်၊ လပ် နေကြပါပြီ။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူမှာ မိန်းမများအနေဖြင့် (ယောက်ျားလေးများပါ) မမြင်အပ်သော၊ မဖေါ်ပြအပ်သော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို လုံခြုံစွာ ဖုံးကွယ် ၀တ်ဆင်ကြရပါတယ်။ အခုတော့ဗျာ.... အရှက်၊ အကြောက်၊ အရိုအသေ ဆိုတာ မြန်မာ့လူ.ဘောင်မှာ လုံးဝ မရှိတော့သလောက်ဘဲ။ အရှက်၊ အကြောက်၊ အရိုအသေ မရှိရင် လူဟာ လူနဲ.မတူဘဲ တိရစ္ဆန်နဲ.သာ တူပါလိမ့်မယ်။
ရှေးဘုရင်ခေတ်ကတည်းက လုပ်ထုံးတစ်ရပ်ရှိတယ်။ ယောက်ျားတိုင်း စွဲမက်ယစ်မူးလောက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှပိုင်ရှင်မိန်းကလေးကို ရှင်ဘုရင်က တော်ကောက်လျှင်ကောက်၊ မကောက်ချင်တော့တဲ့အခါမှာတော့ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောစေဖို. ရည်ရွယ်ပြီး ရှင်ဘုရင်က ထိုမိန်းကလေးကို ပြည့်တန်ဆာဘွဲ. ချီးမြှောက်လေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။
ကဲ... ဘယ်လိုလဲ၊ အနုပညာ စစ်စစ်နဲ. တန်ဘိုးရှိတဲ့ အနုပညာရှင်ဖြစ်အောင် လုပ်မှာလား၊ ခန္ဓာကိုယ်အလှနဲ. ပုရိသ ယောက်ျားထုကို ညှို.ယူ ဖြေဖျော်မှာလား။
မိဘများအနေဖြင့်လည်း မိမိသားသမီးများကို မှန်ကန်စွာ ချစ်တတ်ကြဖို.လိုပါတယ်။ ခေတ်မှီတယ် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို တလွဲဘာသာမပြန်ကြပါနဲ.။ အတိုအပြတ်၊ အဟိုက်အကွဲများ မ၀တ်ရလျှင် ဘာများ ဆုံးရှုံးနိုင်လို့လဲ။ ဘီကီနီ နဲ့ ပြိုင်ရတဲ့ ပြိုင်ပွဲမျိုး ဝင်မပြိုင်ရလို့ ဘာများ ဆုံးရှုံးနိုင်လို့လဲ။
မိန်းကလေးများ၏ အ၀တ်အစား၊ အနေအထိုင် မတတ်ခြင်း၊
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လုံးဝလက်ခံလို့မရတဲ့ ဘီကီနီ နဲ့ ပြိုင်ရတဲ့ မယ်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း ဟာ အကြမ်းဖက်လက်ဆွဲမှု၊ မုဒိန်းမှု လို ရာဇ၀တ်မှူများကို လက်ရပ် ခေါ်နေပါတယ်။ မိသားစု တစ်စုချင်းစီ တာဝန်ယူဖြေရှင်းစေချင်ပါတယ်။
8/31/13, 3:30 AM
တော်တော် ကျော်ကြားချင်လို့ အဖေါ်အချွတ်ပြိုင်ပွဲ ဝင်ပြိုင်တာလား အမြင်ကတ်လာပြီ
8/31/13, 3:37 AM
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းအရ အတိုအပြတ်ဝတ်ရတာပါ... လို့ အကြောင်းပြချက်ပေးပြီး နောက်ကျတော့ မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ မင်းသမီးတွေ.. မော်ဒယ်တွေ.. ဟာ မယ်ပြိုင်ပွဲ ပြင်ပ.. ရိုက်ကွင်းပြင်ပ.. မှာလဲ ဝတ်ပုံစားပုံ.. နေပုံထိုင်ပုံ.. စရိုက်.. အကျင့်စာရိတ္တ.. စိတ်ဓါတ်.. ပါ ပျက်စီးကုန်တာပါပဲ.....
အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ပါ အမိ.....
8/31/13, 3:51 AM
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ၀တ်ချင်တာ ၀တ်လို့ရတယ်
8/31/13, 4:33 AM
မော်ဒယ်ဆိုတဲ့ကောင်မ တော်တော်များများက ခပ်ပျက်ပျက် ကောင်မတွေဘဲ့ မော်ဒယ်တွေက ကလပ်တွေ ပါတီပွဲတွေမှာ အတွင်းခံဝတ်နဲ့ ယောင်္ကျားအများကြီးနဲ့ မူး၇ူးဖက်၇က်၇ုံတင်မက ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့တောင် ယောင်္ကျားအများကြီးနဲ့အိပ်ပီးပီလေ အဲ့မို့ အတွင်းခံဝတ်နဲ့ စင်ပေါ်တက်၇ဲတာပေါ့ မိကောင်းဖခင်သားသမီးဆို ဒါမျိုးမလုပ်၇ဲဘူး
8/31/13, 4:54 AM
အရှက်မရှိတဲ့ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ပြိုင်ရတဲ့ မယ်ပြိုင်ပွဲမျိုး ဖက်ရှင်ရှိုးလျှောက်တာမျိုးကို ခွင့်ပြုတဲ့မိဘတွေလည်း
နင်တို့ ဖါမတွေကြောင့် ရိုးသားတဲ့ မိန်းခလေးရဲ့မိဘတွေက ကိုယ့်သားသမီးကို
ဘယ်သွားသွား စိတ်မချနိူင်ပဲ နေ့စဉ်ရင်လေးနေရတယ်
အခုတလော မုဒိမ်းကျင့်ပြီးရင် ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်တာ များနေပြီ
ဖါမများ ကာမလှုံ့ဆော်တဲ့ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ပြိုင်ရတဲ့ မယ်ပြိုင်ပွဲများ ဖက်ရှင်ပြကွက်များ ရပ်တန့်ပါ
မရပ်တန့်ပါက လူသတ်မုဒိမ်းကောင်များက နင်တို့ကိုရှာပြီး
မုဒိမ်းကျင့်လိမ့်မယ် အဲ့ဒီအခါ ကယ်မယ့်သူ မရှိပါ။
ထီလာ Deblill 09***
8/31/13, 5:26 AM
ye lwin said...
8/31/13, 5:32 AM
ဒါမျိုးနဲ့ နာမည်မကျော်ချင်ပါနဲ့လားးးး
ဟီရိသြတ္တပတရား ကင်းလွန်းပီးး ကြည့်တဲ့သူတော့ မျက်လုံးရှက်မိတယ်
8/31/13, 5:44 AM
မြန်မာမတစ်‌ယောက်အ‌နေနဲ့ ဒီလို ဘီကီနီ ပြိုင်ပွဲ ဝင်တာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ငါထင်တယ်။
ပြိုင်ပွဲမှာဘီကီနီဝတ်ပီးပြိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားလို့ ဆိုပီး လာပြောမနေနဲ့။ ဘီကီနီမဝတ်လို့ မယ်ပြိုင်ပွဲပြိုင်ခွင့်မပေးရင် ဝင်မပြိုင်ရုံပေါ့ကွ။
ဘီကီနီပြိုင်ပွဲဝင်တာနဲ့ နိုင်ငံတိုးတက်တာ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ပညာ အရည်အချင်း စိတ်ဓါတ် အတွေးအခေါ် ခေတ်မှီဖို့ တိုးတက်ဖို့ ပဲ အရေးကြီးတာ။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးစိတ်နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်ပီး တည်ဆောက်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတာ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းပီး တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့လဲရပါတယ်။ ဘီကီနီပြိုင်ပွဲမဝင်လို့ နိုင်ငံမတိုးတက်တာမှမဟုတ်တာ။ တလွဲဆံပင်မကောင်းချင်ကြနဲ့။
အဝတ်အစား ဖက်ရှင်မှာ ခေတ်မှီရုံမက ခေတ်ရှေ့လွန်နေပီး ပညာ အရည်အချင်း စိတ်ဓါတ် အတွေးအခေါ် သုံးစားလို့မရတဲ့လူတွေ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို မချစ်တဲ့လူတွေ တိုင်းပြည် ဘာဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ပျက်ချင်သလောက် ပျက်ပျက် ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပီးရော ဆိုတဲ့လူတွေ ငါတို့တိုင်းပြည်မှာများနေတာကိုက အလုပ်မဟုတ်တာကွ။
8/31/13, 6:13 AM
8/31/13, 6:18 AM
နံမည်ကြီးဖို့အတွက် တစ်ကိုယ်လုံးချွတ်ပြဆိုရင် ချွတ်ပြမဲ့ကောင်မတွေ
ဘာတွေ မှားနေပြီလည်း ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ခရီး ဖာနိုင်ငံကြီးဆီသို့လား
ဘယ်လို ရှေ့ဆက်မလဲ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုဟာ ဟီရိ သြတ္တပ္ပ ကင်းမဲ့ခြင်းလား
ဂုဏ်သိက္ခာကိုတန်ဘိုးထားသူအတွက် မိမိအသက်ဟာ အရှက်တရားတဲ့ ဒါကို ဘာနဲ့လဲမှာလည်း
တို့မြန်မာလူမျိုး ဆိုတာ အသက်နဲ့ရှင်သန်တဲ့လူမျိုး မဟုတ်ဘူး အရှက်တရားကို ဝင်သက် ထွက်သက်ထဲ ထည့်ပြီး အသက်ရှူနေတာ
ဒီလို ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရင် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကို ငါ မတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး ပြန်ယူသွားပါ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာပဲ ငါ ပြန်ရောက်သွားချင်တယ်
ခွေးကိုက်တာထက် နာကျင်စေတဲ့ တို့တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းတွေ ရင်ထဲမှာ မချိဘူး
စဉ်းစား နောင်တစ်ချိန် ဒီနေရာမှာ ငါသမီး မရောက်ဘူးလို့ ဘယ်သူ ပြောနိုင်လည်း
ပေါ်ပေါ်တင်တင် နိုင်ငံကို စော်ကား ဒီလို သရုပ်ပျက် အဝတ်အစားနဲ့ ပလွှားနေတာထက်စာရင် ဝမ်းရေးအတွက် ကွယ်ရာမှာ ဖာခံစားတာက မြတ်ပါသေးတယ်
ငွေကြေးကြောင့် ထင်ပေါ်လိုမှုတွေကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုကို ပျက်ရယ်ပြုနေတာလား
ငွေကြေးနဲ့ ထင်ပေါ်မှု ရဖို့ တစ်ခြားနည်းလမ်းတွေ မရှိတော့ဘူးလား
နဲနဲတော့ ဆုတောင်းနေမိတယ် ဒါဟာ အိပ်မက်တစ်ခု ဖြစ်ပါစေလို့။
8/31/13, 6:33 AM
ဆိုက်ကားသမား ဗိုက်ပူ said...
လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဟာ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ပြောင်ကျကျ စော်ကားပြီး အမြစ်က ဆွဲနှုတ်ပစ်လိမ့်မယ်။
8/31/13, 6:52 AM
ခင်ဝင့်ဝါ ဆို တဲ့ ကောင်မ ရေ
မင်း မိဘမျက်နှာတောင် မ ထောက်ပါလား ငယ်ငယ်လေးထည်းက အ မေ တ ယောက် မင်း အရှက်တွေ သူများ မ မြင်အောင် ပြုစု ထိန်းသိမ်းလာတာ ခု အရွယ်ရောက်မှ မင်း က လူအားလုံးကို ဖင် လှန်ပြ ပြီ ပေါ့ ...
8/31/13, 7:07 AM
ဒီ လို ဘီ ကီ နီ ပွဲ မျိုး တွေ ဆက် လုပ် နေ လို့ က တော့....
သေ ချာ တယ် ၂၀၁၅ မှာ ဖါ နိုင် ငံ စ ဖြစ် ပြီ...
NLD လွတ် တော် ကိုယ် စလှယ် တဦး က လဲ ပြည့် တန် ဆာ ဥပဒေ အဆို တင် သွင်း ဘူး တယ် ဆို တော့.......
8/31/13, 7:16 AM
အော်..... ဒုက္ခ... ဒုက္ခ.....
ခင်ဝင့်ဝါက နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်နေတာ တဲ့လား.....
8/31/13, 7:39 AM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရှိန်ထိုး တိုးတက်နေတာကတော့ ဖေါ်ချွတ်ပွဲ တိုပြတ်ဖက်ရှင် ဒါတွေဘဲ့
မြန်မာတွေက တလွဲဆံပင်ကောင်းရာမှာတော့ နံပါတ်ဝမ်း တစ် ဂဏန်းတစ်ဘဲ့
ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်နဲ့ သိမ်မွေ့လှပါတယ် ဆိုပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ နိုင်ငံတကာကချီးကျူးအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို မြန်မာတွေက ကိုယ့်ဟာကိုယ် တက်နင်းပြီးဖျက်ဆီးနေကြတာ အံ့ဖွယ်လိလိဘဲ့
အရှက်က ဘယ်ရောက်နေလဲ ခင်ဝင့်ဝါရယ်
မိဘတွေကကော မင်းကို ဘာမှမဆုံးမဘူးလား
နင်ဂျာတွတ်ပီ သီချင်း ဆက်ဆိုမယ်
8/31/13, 8:14 AM
ဒါက နိုင်ငံတကာအဆင့်မီတာမဟုတ်ဘူး... သောက်ရှက်မရှိတာ.... ဖအေတွေ မောင်တွေကလည်းမတားကြဘူး... ဘာလဲ ဒီမိုကရေစီအသိစိတ်...
ဖာသယ်မတွေက တစ်ကိုယ်လုံးနီးပါး ပေါ်တင်ချွတ်ပြပြီး ဈေးခေါ်မယ်.. သောက်ဦးဏှောက်မရှိသူတွေက ရှေ့နောက်စဉ်းစားမှုမရှိ အော်ခြင်သလိုအော်ကြမယ်... အခွင့်အရေးသမားတွေက အချောင်နှိုက်ကြမယ်... အာဏာရသူက အခွင့်အာဏာသုံးပြီး..လုပ်စားကြမယ်...
ဘယ်မှာလဲ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု၊ ဘယ်မှာလဲ ၀ံသာနုရက္ခိတတရား၊ ဘယ်မှာလဲ ဗြမစိုရ်တရား၊ ဘယ်မှာလဲ ဥပဒေ၊ ဘယ်မှာလဲ .. ဘာတွေကို လွှတ်ပေးနေမှာလဲ..
မကောင်းမြစ်တာ ကောင်းရာညွန်လတ်... မိဘရင်းဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်မနေပါနဲ့ဗျာ... လောကနီတိကို အခြေခံပညာမှာ ထည့်သင်ပေးကြပါ... အခြေအနေတွေကို ရှက်လွန်းလို့ပါ..
မင်းတို့ စဉ်းစားကြည့်ကြလေ။ အ၀တ်မ၀တ်တဲ့ ကျောက်ခေတ်လိုမျိုးကို ကျော်လွန်ပြီး အ၀တ်ဝတ်လို့ရတဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ခေတ်ကို ရောက်လာတယ်။ နောက်တော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျောက်ခေတ် ဆီကို သမိုင်းနောက်ပြန် ပြန်သွားပြီး ကျောက်ခေတ်ကလို အကုန် ချွတ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်။
ဆုပေးတဲ့ကောင်တွေကလည်း အတွင်းက ဖောင်းဖောင်းဖုဖုလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ဆုပေးတာဗျ။ အဲဒါက အဓိက။ ကျန်တာတွေက အလကားပါ။ ပြီးသွားရင် ညှိလို့ရတဲ့သူနဲ့ တနေ့ တစ်နေရာမှာ တစ်ခါလောက် သူလည်း ကောင်း ကိုယ်လည်း ကောင်း၊ အညောင်းပြေပေါ့။ အီဆိမ့်သွားတာကလည်း တစ်မျိုးပေါ့။ ဖိုးဖိုးတို့က ပိုတောင်ကြိုက်သေး။ မေမေကြီးတို့ မသိအောင်ပေါ့။ သားသားလည်း ကြိုက်တယ်။ အဆီဖူးလေး ပါရင် ပိုအရသာရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
ဒါ့ကြောင့် စင်ပေါ်တက်ပြီး အဆီဖူးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပနေကြတာ ဗျောင် ဆိုတော့ လူတွေမှ ဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူး။
ဒါ မြန်မာမ တဲ့လား
June Ko Kyaw said...
ကိုယ့် ဆွေမျိုး မိန်းကလေးတွေ မော်ဒယ်လ်ဂဲလ် လုပ်မယ် ဘာမယ် ညာမယ် ဝင်ပြိုင်မယ် ကြားလို့ကတော့ နဖူးကို သံဖနောင့် နဲ့ကို ပေါက်ပစ်မယ် !!!!
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့တဲ့ ဖါသည်တိုင်းပြည် တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ပွဲ
8/31/13, 8:41 AM
အဲလောက်တောင် အဖော်အချွတ်ရဲတော့ အပျိုစင်လေးမှ ဟုတ်ပါစ
အခုခေတ် မင်းသမီး မော်ဒယ် အဆိုတော် အများစုကတော့ အပျက်မတွေပဲ
8/31/13, 8:54 AM
တော်တော်ကိုစောက်သုံးမကျတဲ့ ကောင်မ ။ ကိုယ်တုံးလုံးနီးပါးနဲ့ စင်ပေါ်တက်ပြီး စောက်ရှက်မရှိ အဖေါ်အချွတ်ပြိုင်ပွဲ ဝင်ပြိုင်တာ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်ပဲ ။
ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသူတွေတောင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးဝတ်လာကြတဲ့အချိန်မှာ နင်တို့က လက်နဲ့ရေး ခြေနဲ့ဖျက် လုပ်ရသလား
နံမယ်ကြီးဖို့ပဲသိတဲ့ နွားမရဲ့ ။
နင့်လို ကောင်မတွေက မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမတွေပဲဇြစ်မယ် ။ နင်တို့ ဒီလိုဝတ်ပြီး ပြိုင်ရဲတယ်ဆိုတော့ နင်တို့ကို ဖာသည်အဆင့်လောက်ပဲ သတ်မှတ်တယ် ။
ရှေးတုန်းကဆို မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မမြင်အပ်တာကို
မြင်မိရင် မြင်တဲ့ ယောင်္ကျားက မယားအဖြစ် သိမ်းလို့
ရတယ်တဲ့ ။ စောက်ရှက်ကမ်းကုန်သွားတဲ့သဘော
ဖြစ်လို့ နေလိမ့်မယ် ။
ဒီလိုသာဆို နင်တို့ရဲ့ မမြင်အပ်တာကို မြင်သွားမိတဲ့ ယောင်္ကျားအားလုံးကို နင်တို့ လင်တော်ရမှာနော်။ စတုန်းက လာစပြီး နောက်မှ ကြောက်ပါပြီ မအော်နဲ့ ။
8/31/13, 9:19 AM
သံဘီလူး ပြောတာကို ထောက်ခံတယ်
8/31/13, 9:34 AM
မိန်းမဆိုတဲ့အမျိုးက ကိုယ့်အလှနဲ့ 
အမျိုးသားတွေကို ဆွဲဆောင်ချင်တာ သဘာဝပါ
ဒါပေမဲ့ မတတ်သာလွန်းလို့ ကြည့် နေကြရတာ
နိုင်ငံနဲ့ လူမျိး ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်တယ်လို့ ထင်နေကြတာ
ဒီcommentကို ကျွန်တော် ဝင်ရေးရတာကလဲ
နင်တို့ လုပ်ရပ်တွေကို မကြိုက်တဲ့သူတွေ
များတယ်လို့ သိစေချင်လို့ ပါ
8/31/13, 9:37 AM
ဒါဆို ငါတို့ကိုလည်း ဈေးနှုံးနှင့် ဖုန်းနံပါတ် ပေးလေ
8/31/13, 9:56 AM
မင်းသမီး မော်ဒယ် အဆိုတော်တွေက နာမည်ကြီးလာစမှာ ၇ိုးပေမဲ့
မင်းသမီး မော်ဒယ် အဆိုတော်တွေ ၇ှိပါတယ်
မော်ဒယ် မင်းသမီး အဆိုတော် ညီမလေးတို့ရေ
မြန်မာပရိသတ်က ဘာလဲ ဆိုတာ နင်တို့ တွေ တွေ့ပြီနော် ။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် အစ်ကိုကြီးတို့ 
လည်း ဒါမျိုးလေးတွေကြည့်ပြီး လန်းတာပဲ ။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ် လူမျိုးရဲ့ဓလေ့ ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမတွေကို
ပစ်ပယ်ပြီးတော့လည်း ဖီလာဆန့် ကျင်မပြုချင်ပါဘူး ။
မင်းသမီး သက်မွန်မြင့် နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်တဲ့အနမ်းမျိုး
ပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုး မရိုက်ဘဲ ငြင်းလိုက်တာ
ပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာ ပိုရသွားတယ်မဟုတ်လား ။
အစ်ကိုလည်း သက်မွန်ကို ကိုယ့်နှမအရင်းလေးလိုကို
လေးစားတန်ဖိုးထားပြီး သူ့ ဇာတ်ကားလေးတွေ
နယ်ပယ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်
နိုင်လေလေ တန်ဖိုးထား ချစ်ခင်မှုတွေ ရလေလေ ဆိုတာပါပဲ ။
မော်ဒယ် မင်းသမီး အဆိုတော် ညီမလေးတို့ရေ။
8/31/13, 10:12 AM
အထက်က comment တွေကို ဖတ်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်
မိမိတို့ မော်ဒယ်တွေဆိုတာ ဘာလဲ ?
ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ ?
ပန်းတိုင်က ဘယ်မှာလဲ ?
ဘယ်လိုရှေ့ ဆက်လှမ်းမလဲ ? .....
မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲ မေ့မထားသင့်ပဲ
ဒီနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု
အများပြည်သူ လက်ခံ မခံ စဉ်းစားကြပါရန် ......
8/31/13, 10:22 AM
ဒါပေမယ့် ရဲတင်းတာကတော့ ရှက်ဖွယ်
8/31/13, 10:31 AM
ခင်ဝင့်ဝါက မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုဆောင်ဖို့ ဘီကီနီဝတ်ရတာတဲ့လား ဟင်
အခုခေတ်က မြန်မာဆန်ဆန်နဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုဆောင်လို့ မရတော့ဘူးလား
8/31/13, 10:40 AM
ko zaw win myint said...
9/21/13, 11:08 PM
သူ့ေ့ေ့နေရာမှာကိုယ်ဆိုရင်ဝတ် ရဲမှာမဟုတ်ဘူး
အဲဒီတော့ကိုယ်မလုပ်နိုင် တာကိုသူလုပ် နိုင် တယ်ဆိုတော့ချီး ကျူးတယ်လို့ဲ့ပဲပြောရမလား
10/17/13, 12:24 PM
dotegyi mg said...
11/14/13, 1:10 AM
ခင်ဝင့်ဝါ ဟာငါ့မိန်းမ မင်းမထိနဲ့